18-03-12 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများ၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ထမ်းများ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့် ၂၀၁၆ သည် Better Motor အတွက်နောက်ထပ်ရိတ်သိမ်းနှစ်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့နှစ်စဉ်တိုးတက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုရတဲ့နေကြသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုသည် ၂.၉ သန်းရှိပြီး၊ ၄၅၅၀၀၀ အစုံသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၂.၄၅ သန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တိုးလာခဲ့သည်။
USA ရှိ Ohio ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှအင်ဂျင်နီယာ Li Dongwei သည် Shandong Better Motor Co. , Ltd သို့သွားရောက်ခဲ့သည်
ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့်အလိုအလျောက်အင်ဂျင်နီယာလီ Dongwei သည်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်တွင်ဆရာဝန်နှစ်ဆသောဒေါက်တာဘွဲ့ရှိသောလျှပ်စစ်သိပ္ပံဓာတ်ခွဲခန်းမှပါရဂူသုတေသီ Li Dongwei သို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ ..
Better Motor ရှိသတင်းအချက်အလက်စနစ်အင်ဂျင်နီယာစီမံကိန်း၏စီမံကိန်းအဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်
ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် Better Motor ရှိသတင်းအချက်အလက်စနစ်အင်ဂျင်နီယာစီမံကိန်း၏စီမံကိန်းအဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ Shandong Sanjiang လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်ဤစီမံကိန်းကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်းအတွက်တာဝန်ယူသည်။ စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းတွင်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ယခု Sanjing Electric Engineeri ...
အသစ်သော High Torque 16DCT Athlonix ™ Mini Motor
18-02-27 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
Portescap သည် 16DCT motor အသစ်ကို၎င်း၏ torque DCT range Athlonix motor များသို့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ 16DCT မော်တာသည် ၂၆ မီလီမီတာသာအရှည်အားဖြင့် ၅.၂၄ mNm ထိစဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နိုင်သည်။ 16DCT တွင်စွမ်းအားကောင်းသော Neodymium သံလိုက်များနှင့် Portescap ၏သက်သေပြထားသောစွမ်းအင်ထိရောက်သော coreless ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုထားသည်။ အကောင်းဆုံး ...
နှိမ့်ချသောဖုန်စုပ်စက်သည်ယနေ့အသုံးပြုသောအိမ်သုံးသန့်ရှင်းရေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရိုးရှင်းသော်လည်းထိရောက်သောဒီဇိုင်းသည်ဖုန်မှုန့်များနှင့်အခြားသေးငယ်သည့်အမှုန်များကိုလက်ဖြင့်မျက်နှာပြင်များမှဖယ်ရှားရန်နှင့်အိမ်သန့်ရှင်းရေးကိုပိုမိုထိရောက်မြန်ဆန်သောအလုပ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပစ်လိုက်သည်။ ဘာမှမသုံးဘူး ...
Mitsubishi Motors သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိ Outlander EX ယာဉ်များကိုပြန်လည်အမှတ်ရစေသည်
Mitsubishi Motors သည်ပြinနာရှိသော windscreen wipers ရှိသောတရုတ်နိုင်ငံတွင် ၅၄,၆၇၂ ခုအားပြန်လည်သိမ်းဆည်းမည်။ အဆိုပါပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းမှာဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်မှ စတင်၍ ၂ ဝဝ ၆ နိုဝင်ဘာ ၂၃ မှစက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်အကြားထုတ်လုပ်သော Outlander EX မော်တော်ယာဉ်များအတွက်ဖြစ်သည်ဟုအရည်အသွေးကြီးကြပ်ရေး၊
Piezoelectric ultrasonic motor များတွင်သိသာထင်ရှားသောအားသာချက်နှစ်ခုရှိသည်။ ၄ င်းတို့သည် ၄ ​​င်းတို့၏မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့်ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကုဗမီလီမီတာပမာဏရှိသော stator ကို အသုံးပြု၍ ရှေ့ပြေးပုံစံ micro ultrasonic motor ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ငါတို့ဟောင်း ...
Global နှင့် China Micromotor Industry Report, 2016-2020
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိုက်ခရိုမော်တာထုတ်လုပ်မှုမှာယူနစ် ၁၇ ဒသမ ၅ ဘီလီယံရှိခဲ့ပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တိုးတက်မှုမှာ ၄.၈% ရှိသည်။ စက်မှုနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုခေတ်မီစေရန်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကြောင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ထုတ်လုပ်မှုသည် ၁၈.၄ ဘီလီယံအထိမြင့်တက်သွားနိုင်ပြီး ၂၀၂၀ တွင် ၂၃ ဘီလီယံအထိရောက်ရှိလာနိုင်သည်။